घेराबन्दीमा राजपा : सरकार निल्नु न ओकल्नु ! | Ratopati
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घेराबन्दीमा परेको छ । राजपा नेपालले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । साथै, अगामी दिनमा राजनीतिक सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोहीअनुसार उपसभामुख पदका लागी राजपा नेपाल र नेकपाबीच बार्गेनिङ चलिरहेको छ ।
नेकपाको शर्तले राजपा नेपालका नेताहरु सशंकित बनेका छन् । राजपा नेपालका एकजना महासचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘नेकपाले काँग्रेससँग कुरा गर्दा त्यहाँ सरकारको कुरा उठ्दैन । काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन भन्दैन । तर, राजपा नेपालसँग कुरा गर्दा किन सरकारमै सहभागी हुन दवाव दिइरहेको छ ? यो कुरा बुझ्न सकेको छैन ।’
उता, समाजवादी पार्टीको आफ्नै दाउ रहेको छ । राजपा नेपाल सरकारमा जानेबित्तिकै तराई मधेशमा त्यसको विरोध गर्ने र राजपा नेपालका असन्तुष्ट नेताहरुलाई आफूतिर तान्ने उसको रणनीति रहेको छ ।
#राजपा नेपाल#नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)